नेपालका सिनेमा हलमा मुसाको रजाईँ - Media Dabali
आइतवार, कार्तिक १६ २०७७Nov 01 2020
टेकू अस्पतालले पनि माग्यो काेराेना संक्रमितसँग ५० हजारसम्म धरौटी
बिहे भोज खाएका ४४ जना बिरामी, अस्पताल भर्ना
कोरोना संकट चुलिदै, १३ जिल्लामा ५ सय बढी संक्रमित
आइतबारदेखि यहाँका विद्यालय खुल्दै
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ यसपालि स्थगित
२४ घण्टामा थपिए यति संक्रमित, कतिले जिते कोरोना ?
बालुवाटारमा ओली-प्रचण्डबीच भयो यस्तो कुरा, विवाद साम्य होला त ?
यो तिहारमा भारतबाट फूल नल्याइने
उपत्यकाका सवारी साधनका लागि तोकियो यस्तो मापदण्ड
# मीनकृष्ण महर्जन
# सुशिल प्याकुरेल
नेपालका सिनेमा हलमा मुसाको रजाईँ
बुधवार, आश्विन २८ २०७७
काठमाडौं - झन्डै ७ महिनासम्म बन्द भएका सिनेमा हलमा लाखौं मूल्यका सिट मुसाले काटेर काम नलाग्ने पारिदिएको छ । हेटौंडाको ओम्याक्स र एनएस सिनेमा हलमा मुसाले सिट र कार्पेट नष्ट गरेर हैरान भएको सञ्चालकहरुको भनाइ छ । करोडांै लगानीमा स्थापना गरिएको हल बन्द हुँदा सञ्चालकलाई घाटा त परेको छ नै, त्यही हलबाट आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएका मजदुरलाई समेत ठूलो असर परेको छ ।
हेटौंडा–४, नारायणी मलमा रहेको एनएस सिनेमा चैतदेखि बन्द छ । कोरोना महामारी फैलिएकै कारण बन्द रहेको हलमा हाल मुसाले दुःख दिन थालेको छ । हलभित्र उज्यालो हुन नपाएको र सुनसान रहेका कारण मुसाले त्यहाँ रजाइँ गर्न थालेको छ । हलका करिब ३५ देखि ४० वटा सिट मुसाले टोकेर काम नलाग्ने अवस्थामा पु¥याएको छ ।
हल सञ्चालक नवराज आचार्य भन्छन् – ‘दुई ठाउँमा हल सञ्चालन हुँदै आएको थियो, जसमा अडियो वानमा एक सय ५० र अडियो टुमा दुई सय ५० सिट छन् । हाल ती सिट र कार्पेटमा मुसा लाग्न थालेपछि चिन्तित बनाएको छ ।’ प्रतिसिट करिब २० हजार मूल्य पर्ने उनले बताए । त्यहीअनुसार मुसाले सिट काट्दै जाने हो भने भौतिक संरचनामा मात्र लाखौं घाटा हुने आचार्यले गुनासो पोख्नुभयो । मकवानपुरे दर्शकको अर्को लोकप्रिय हल ओम्याक्सका सञ्चालक नरेन्द्र महर्जन भन्छन्– ‘हलमा मुसाले दुःख दिइरहेको छ । करिब ३ सय सिट नै मुसाले नष्ट गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’ ‘कार्पेट र सिटमा मुसाको रजाइँ थामिनसक्नु छ।’ उनी भन्छन्।
अब पनि सञ्चालन नभए फिल्म क्षेत्रदेखि सञ्चालकहरु उँभो लाग्न निकै समय लाग्ने निश्चित रहेको बताउनुहन्छ । स्वास्थ्य सुरक्षा मध्यनजर गर्दै अन्य क्षेत्रजस्तै हल सञ्चालनमा आओस् भन्ने चाहना राख्ने सरोकारवाला पक्ष यतिबेला सरकारी निर्णयको पर्खाइमा छ । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड तोकेर सञ्चालन अनुमति दिन उनीहरुले सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । हल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जानु जरुरी रहेको एनएस सञ्चालक आचार्यले बताए ।
‘अब पनि नखोले बैंकको किस्ता तिर्नुपर्ने हल सदाका लागि बन्द हुन बेर लाग्दैन । यसले कयौं जनशक्तिलाई थप मर्कामा पार्नेछ।’ –उनले भने ‘विद्युत् महसुलमा जरिवाना देख्दा निकै नै दुःख लागेको छ ।’ यतिबेला आम्दानी छैन, त्यसमाथि विद्युत्ले कारबाहीसहित महसुल मागेको आचार्यले गुनासो गरे । पुरानो हल ओम हल २०७५ साल साउनमा आगलागी भएको थियो ।
२०७६ वैशाखमा नयाँ प्रविधिसाथ हल पुनर्संञ्चालनमा आएको थियो । आगलागीबाट तीन करोड नोक्सान भएको थियो भने नयाँ प्रविधिसहित ल्याउँदा तीन करोडकै लगानीमा पुनर्संञ्चालनमा आएको सञ्चालक महर्जनले जानकारी गराए । कोरोनाको कहरबीच सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा फिल्म क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुन सकेन ।
यस क्षेत्र कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रको सूचीमा पनि परेन । तर यस क्षेत्रका निर्देशक, कलाकार तथा हल सञ्चालकको पीडा भने बढ्दो छ । यतिबेला नेपालका चलचित्रप्रेमीहरुले ‘फन मिस’ गरेका छन् । रिफ्रेसमेन्टको माध्यम नै छैन । हलको वातावरण नपाए पनि घरमा टिभी हेरेर समय बिताइरहेका छन् उनीहरु ।
हुनत युट्युब नभएको हैन, तर युट्युबबाट घरमै फिल्म हेर्दा दर्शकलाई न क्वालिटीयुक्त लागेको छ, न त हलमा जस्तो आवाज नै दमदार । दर्शकहरु कोरोना हटेर फेरि भीडसाथ फिल्म हेर्न जाने दिनको प्रतीक्षामा छन् । ‘सेनिटाइज गरी, ज्वरो नापेर ४० प्रतिशतमात्र दर्शक राखेर सिनेमा हल खोल्न पाउने वातावरण भए हुन्थयो।’ –सिनेमा हल सञ्चालक भन्छन् । आजको समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ।
बुधवार, आश्विन २८ २०७७०८:३०:३०
# चलचित्र हल
भारतले भन्यो- 'निहुँ खोज्यौ भने तिम्रै भूमिमा आएर युद्ध गर्छौं'
नेकपा जिल्ला सचिवालय सदस्य केसी कांग्रेसमा प्रवेश, नेकपामा सन्नाटा
सीमामा अड्किएका कन्टेनर पास गर्न चिनियाँ एजेन्टहरुले पैसा मागेको भन्दै व्यापारीहरु आक्रोशित
सत्तारुढ नेकपा विभाजनको डिलमा, दशैंलगत्तै परिणाम देखिने
मानवअधिकारीवादीको भेषमा गुण्डागर्दी गर्ने नेकपा कार्यकर्ता सुशिल प्याकुरेलको पर्दाफास
जनता सरकार खोज्दै, सरकार भिटेन खोज्दै
ओलीविरुद्ध खतरनाक ‘स्टेप’ चाल्दै प्रचण्ड, खुमलटारमा नेताको ताँती
सभामुख सापकोटको धम्की दिँदै नेकपा कार्यकर्ताले गरे गुम्बा तोडफोड
Copyright © 2020 All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend Technology